Sheekooyinka Dhalinyarada Luka Jovic Sheeko Xogta Lahaa Xogta Leh
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Sheekooyinka Dhalinyarada Luka Jovic Sheeko Xogta Lahaa Xogta Leh
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan Falcao oo u dhashay Serbia. Dabeecadeena Luka Jovic ee Carruurta iyo faahfaahin la'aanta Cilmi-baaristu waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo ah laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda.
Sheekada Dhalaanka Luka Jovic - Wakhtiga caruurnimada ilaa taariikhda
Haa, qof walba wuu ogyahay dareenkiisa hore ee goolka, kaasoo ka dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan kubadda cagta Yurub. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal kubada cagta ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Luka Jovic 'Biography' oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Luka Jovic ayaa ku dhashay maalintii 23rd ee December 1997 hooyadiis, Svetlana Jovic iyo aabe, Milan Jovic oo ah ciyaaryahankii hore ee kubada cagta ee magaalada Bijeljina, Bosnia iyo Herzegovina.
Jovic wuxuu ku koray guri aad u liid leh waalidkiis iyo walaashiis tuulada baadiyaha ah ee Batar, taas oo ah 14 ee koonfurta Bijeljina. Ka hor dhalashadiisa, waalidiintiisa iyo xubnaha qoyska oo dhan waxay la kulmeen kicinta 1990 ee horay u dhacay iyo wixii ka dhacay Bijeljina, Bosnia iyo Herzegovina.
Luka Jović Qoyska iyo wadamada kale waxay mar hore ku dhibaateeyeen horaantii 1990.
Deganaansho la'aanta ka jirta Bosnia iyo Herzegovina ayaa ka hor istaagtay kubada cagta in ay ku soo laabtaan xirfad barwaaqo ah isla markaana aabihii Luka Jovic aabihiis ayaa dhamaaday. Nasiib darro, Milan Jovic ayaa keliya fursad u helay inuu ciyaaro kubadda kubada cagta iyadoo qeyb ka ah Partizan Belgrade oo dakhliga soo galiyay qoyskiisa.
Horumarinta, ma jirin ciyaaro ama cayaaro, kaliya kubadda cagta oo Jovic uu la cayaaray oo la ciyaaray aabihiis. Luka Jovic ayaa aabihiis Milan u dheelay xirfadiisii ​​hore ee tartanka, waxaana uu go'aansaday inuu sii wado riyadiisa ah wiilkiisa.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Inuu haysto aabe kubbada cagta jecel iyo hooyo taageersan, waxa kaliya ee dabiiciga ah ee jacaylka cayaaraha quruxda badan lagu dhaliyo da 'yarta Luka Jovic kaasoo marwalba la arkay isagoo la socdo aabihiis. Milan waxay ku dhiirigelisay wiilkiisa in uu diiradda saaro waxbarashada kubadda cagta iyadoo rajeyneysa inuu ka caawiyo inuu sii wado riyadiisa aan la arki karin.
Luka Jovic - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada. Lacagta IG
Luka Jovic waxaa loo soo bandhigay ciyaaraha da'yarta 5 ee 2002, sanadka uu kubada cagta u arkay isaga oo wax u dhimaya waxbarashada uu uga mahadcelinayo fursad uu ku bilaabi karo mustaqbalkiisa.
In 2004, nasiib wacan Luka ka dib markii tijaabo lagu guuleystey ayaa fursad u helay inuu aasaaso aasaaskiisa xirfadeed ee shahaadada Mini Maxi. Tani waa horyaal horumarineed oo Belgrade ah oo loogu talagalay carruurta ay da'doodu u dhaxayso 4 iyo 12. Ka hor inta uusan u safrin kulankiisii ​​ugu horeeyay, Jøger Jovic wuxuu baray sida loola shaqeeyo labada lugood. Inkasta oo Jovi uu markii hore ka ciyaaro lugta midig, hadana waxa uu bartilmaameed u ahaa inuu kubada ku dhufto sida kalsoonikiisa bidix.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Nolosha Mudnaanta Hore
Ciyaaryahanka Luka Jovic ayaa xaqiiqda ka muuqda kulankiisii ​​ugu horeeyay ee horyaalka. Ma ogeyd?… Waxa uu dhaliyay seddexleey kulankiisii ​​ugu horeeyay, taasoo keentay in agaasimaha kooxda ay u ballan-qaadeen inuu lacag siiyay aabihiisa si uu ugu dhiirigeliyo wiilkiisa inuu dhaliyo goolal badan.
Milan Jovic ayaa la siiyay € 50 gool kasta oo uu dhaliyey. Waxa kale oo uu bixiyay kharashka socdaalka ee 2000 oo uu ku keenay Luka oo ka yimid tuuladooda oo ku yaala Belgrade. Kuwaas oo dhan ayaa la sameeyey sababtoo ah wiilkiisa ayaa loo tixgeliyey inay yihiin ciyaartoy qiimo leh.
Mid ka mid ah ciyaaraha Jovic oo uu kuftay goolal, wuxuu la wareegay Toma Milićević, oo ah sawirada Red Star, oo ku casuumay Red Star Belgrade. Luka Jovic waxa uu maray wareegyo kala duwan oo uu ku biiray kooxda. Hoos waxaa ku yaal sawir isaga oo ku jira midabada kooxda.
Luka Jovic Nolosha Shaqada Hore
Ka hor inta uusan ku biirin kooxda, aabihiis Jovic ayaa mar uu tababar la qaatay Partizan, koox uu ku soo ciyaaray oo uu udhaqaaqay saxiixa Jović. Partizan ayaa u soo bandhigtay Milan 200 euros bil kasta wiilkiisa Luka Jovic inuu la ciyaaro, laakiin wuxuu bedelay maskaxdiisa waxaana ku adkeysanayay wiilkiisa yar inuu sii joogayo Red Star.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Waddada loogu talagalay sheekada
Jović ayaa sii waday in uu iftiimiyo kooxo dhalinyaro ah waxaana si dhakhso ah loo tixgeliyaa mustaqbal. Xiddiga da'da yar ayaa kor u kacay, wuxuu bilaabay inuu musuqmaasuqo Ibrahimovic iyo Radamel Falcao. Ma ogeyd?… Jovic wuxuu mar horey u qoray magacyada sanamyadii uu ku lahaa garsooraha ka dib markii uu asal ahaantiisa Facebook ku qoray.
On 28 May 2014, da 'da sano ee 16, Jovic wuxuu kulankiisii ​​koowaad ee ugu horeeyay u ciyaaray Red Star. Markii ugu horeysay ee xirfadiisa ciyaareed, waxa uu jabiyay rikoorkii Dejan Stanković isagoo ahaa ciyaaryahanka ugu da'da yar ee gooldhalinta tartanka taariikhda kooxda.
Luka Jovic Waddada Abaabulista Sheeko. Amaahda RedStar iyo IG
Tani waxay soo bandhigtay kooxo badan oo Yurub ah oo raadinaya saxiixiisa. Go'aanka go'aan ayaa yimid Febraayo of 2016 markii Jovic go'aansatay inuu u guuro daaq cusub. Xiddiga sannadka ee 18 ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee xirfadiisa ciyaareed markii uu ku biiray kooxda Benfica.
Inkastoo Jovic uu ku jiray Benfica, waxaa jiray warbixino ay soo saareen Football Leaks kaas oo soo bandhigay xiisaha uu u qabo Jović qandaraaskiisa, oo ah war ah oo niyad jab ku ah xiddiga da'da yar. Mar labaad mar kale, Jovic waxa uu bilaabay inuu istaago horumarinta, taasina waxay sababtay dhibaatooyin badan oo loogu talagalay da'yarta.
Luka Jovic Waddada Weyn ee Sheekada- Markay Tahay Gogosha. Lacagta IG
"Waxyaabaha maskaxda ihi, waxaan haystay gurigeyga, waxaanan sameeyay qaladaad halis ah."
ayuu yiri Jovic Dhibaatooyinka warbixinta. Weeraryahanka reer Serbia oo mar hore ka soo baxay jabinta rikoorkii hore ee Red Star ayaa iska diiday inuu uciyaaro Benfica B kulan ka tirsan Segunda Liga.
Kadib markii la ilaaway Yurub, hal koox ayaa ku sugneyd codsi sii waday Serbian. Waxa ay aheyd kooxda Jarmalka ee Eintracht Frankfurt oo ugu danbeyntii badbaadisay Jović oo ka soo jeeda khadka dhexe ee Benfica. Kooxda ayaa aqbashay deyn iyo ka dibna heshiiskiisa joogtada ah ayaa ka dhigtay.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Kusoo sharax sheekada
Ka dib markii xilli ciyaareedkii labaad ee Jarmalka, kooxda heysata horyaalka Serie A ayaa heshay qaab ciyaareedkeeda, waxaana ay noqotay qeyb ka mid ah Eintracht Frankfurt kooxdii ugu horeysay. Jovic ayaa loo yaqaanay mid ka mid ah weerarka kubada cagta ee labada lugood. Waxa uu ku soo barbaaray dareen macquul ah oo ku saabsan wakhtigaas, kaas oo keenay goolal qurux badan iyo dabaaldegyo waaweyn.
Luka Jović oo ku guuleystay abaalmarinta sheekada Lacagta Lagu Ciyaaro XINGXXUM
Jovic wuxuu ku adkeystay kor u kac wayn oo horseeday horumarinta taasoo keentay inuu ka mid noqdo guryaha ugu da'da yar ee ugu da'da yar ee Yurub. TWeeraryahanka reer Serbia oo Real Madrid ku garaacay albaabadiisa ayaa noqday mid aad u sarreeya, isla markaana aan diyaar u aheyn inuu cagtiisa saaro pedartiilkiisa. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Nolosha Xiriirka
Iyadoo Jovic uu ku soo caan baxay, waa hubaal in taageerayaashiisa ay hubaal ka weydiin doonaan su'aasha gubaneysa. Yaa waa gabadha saaxiibka ah ee Luka Jovic, xaaskiisa ama sida qaar u yeeri lahaa, WAG ?.
Luka Jovic ayaa xiriir la lahaa Andjela Manitasevic tan iyo markii uu dhalinyaradiisii ​​ciyaaraha kala kulmay Red Star Belgrade. Hoos waxaa ku yaal sawir shimbiraha jacaylka ah inta lagu jiro sanadaha hore ee xiriirka.
Luka Jovic Nolosha Dhibaatada - Xaqiiqooyinka aan la qorin
Ka gaabinta sawirka kore iyo kan hoose ee hoose, waa iska cadahay in Andjela Manitasevic uu ka weynaan karo ninka. Yaa daryeelaya !! Dhammaanba, jacaylka dhabta ah waa muhiim waana da'da waa tiro.
Andjela Manitasevic iyo Luka Jovic
Luka Jovic waxaa loo yaqaanaa inuu muujinayo baxsashada isaga iyo saaxiibkiis Andjela Manitasevic oo ku saabsan warbaahinta bulshada. Shaki la'aan, labaduba waxay ku raaxaystaan ​​xiriir adag oo lagu dhisay saaxiibtinimo.
Andjela Manitasevic iyo Luka Jovic jecel yahay inay helaan waqti tayo leh
Xaqiiqda ah in labada jecel ay la kulmeen mudo ah caleemo qarsoodi ah shaki kuma jiro in arooska ay noqon karto talaabada xigta ee iyaga loogu talagalay.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaatid nolosha Luka Jovic nolosheeda shakhsiyeed waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. Jovic waa mid furan. Waxa uu aad u niyadjabsan yahay, xiisaha leh, wuxuuna jecel yahay isbeddellada. Jovic wuxuu awood u leeyahay inuu bedelo fekerkiisa ficil wax ku ool ah wuxuuna sameyn doonaa wax walba si uu u gaaro himiladiisa iyo ujeedooyinka shakhsiga ah.
Ciyaartoyda kubadda cagta, sida aan ku noolahay LifeBogger waxay jecel yihiin xayawaankeena iyo Luka Jovic naftiisa maaha mid ka reeban. Xitaa waxaad ku jirtaa halkaas halkaas ma aha daacadnimo ka tagay ciyaarta casriga ah, ma tixgelinayo xiriirka u dhexeeya Jovic, eeyihiisa iyo dameerka.
Luka Jovic Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - LifeStyle Life
Jovic ayaa lagu qiimeeyaa £ 49.50 m taas oo macnaheedu yahay inuu yahay ciyaaryahan kubadda cagta ah. Si kastaba ha ahaatee, ka garsoore xisaabtamkiisa warbaahinta bulshada, waa nuuc kubada cagta ah oo ku bixiya lacagaha uu ku qaato safarro raaxo leh labadaba dhulka iyo biyaha.
Luka Jovic Hab-nololeedka
Si kastaba ha ahaatee, Jovic, ma ahan mid la ogaan karo oo leh caan ka mid ah gawaarida quruxda badan, gumeysiga, gardarrada iyo gabdhaha. Waxa uu caqli ku yahay inuu maareynayo lacagtiisa ku aaddan dhinacyada nolosha.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Nolosha Qoyska
Isagoo ka hadlaya asalka qoyska ee Luka Jovic, waxay leeyihiin xididada Yugoslavia ka dib markii dagaalkii labaad ee adduunka uu ku dhexjiray lix waddan oo mid ka mid ah Bosnia iyo Herzegovina. Aabaha dhalay Luka Jovic Milan, oo ku dhashay 1975 ayaa hore u ahaa garabka bidix ee kooxda Partizan oo ku yaala Serbia.
Wiilka Luka Jovic ee Milan Jović. Nostalgija
Si ka duwan wiilkiisa Luka, Milan marnaba ma gaadhin heer sare oo wanaagsan oo kubada cagta ah. Waxa uu ciyaaray kaliya 82 keliya ciyaarahiisa kubada cagta markii uu ku guuleystay horyaalka Premier League sannadkii hore 2000 ka hor inta uusan kabihiisa xirin 2003.
Milan Jovic iyo xaaskiisa Svetlana ayaa jecel inay nolol caadi ah ku qaataan Serbia, inkastoo uu wiilkiisa kubada cagta ka soo ciyaaray. Macluumaadkani wuxuu yimid markii Jarmal BILD wargeyska ayaa markiiba raadinayay raadinta guriga loogu talagalay qoysaska Luka Jovics ee ku yaala Serbiya. Waxay ogaadeen aabihiis iyo xaalada qoyskooda.
Aabaha Luka Jovic -Papa Milan. Ku darso sawir
Intii lagu guda jiray wareysiga Blid, Milan Jovic ayaa shaaca ka qaaday inuu mar hore ku garaacday xaaskiisa Svetlana xirfaddiisa wiilkiisa islamarkaana uu naftiisa ku helay habsami u socodka. Maanta, Jovic's aabbihii, hooyo, walaashiis iyo qaraabadoodba waxay u arkaan faa'iidooyinka khatarta ay leedahay madaxa qoyska.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Ma ogeyd?… Nofeembar 2015 wuxuu ahaa bilo tijaabo ah oo loogu talagalay qoyska Luka Jovic. Tani waxay ahayd wakhti ay qoysku ka soo gaadhay gacmihii ka yimid Loznica (magaalo ku yaala Serbia) oo ku hanjabay Luka Jovic in haddii uusan bixinayn,jebiso lugihiisa".
Luka Jovic Xaqiiqooyin aan sax ahayn. Amaahda YouTube iyo IG.
Tuhmanaha ayaa la qabtay kadib markii waalidiinta Jovic ay arinta u gudbiyeen booliska kuwaas oo waqtigooda qaatay si ay baaritaan ugu sameeyaan ayna u qaataan dambiilaha.
Ma ogeyd?… Luka Jovic ayaa marki shil uu ku dhacay baabuurkiisa Mercedes ee magaalada Patkovača, oo u dhow goobta uu ku dhashay ee Bijeljina ee Bosnia iyo Herzegovina. Shilkii, Luka Jović ayaa ku dhaawacmay laakiin isla markiiba waxaa la badbaadiyey ka dib markii xoogaa faragelin ah.
Luka Jovic mar shil ayaa ku dhacay. Ku darso Fenix.
Ma ogeyd?… Jovic wuxuu leeyahay xabadka oo ku jira xabadka, mid ka mid ah taas oo taageeray taageerayaasha oo la yaabay waxa uu tattoo macnahiisu yahay.
Xaqiiqooyinka Tattoo Luka Jovic
Waa hagaag, waxay u egtahay sawirka Ciise oo ka tarjumaya diintiisa diiniga ah ee diinta masiixiga kaas oo aad ugu baahsan Serbia. Jovic ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday taatuustan intii uu socday koobka adduunka ee 2018 ee Russia.
Ma ogeyd?… Jovic waa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee dhaliyey shan gool hal kulan oo Bundesliga ah. Rikoor hore oo uu qabtay Robert Lewandoski. Hoos waxaa ku qoran fiidiyowgiisa oo shan gool dhaliyay hal kulan oo hal kulan ah.
Luka Jovic Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Soo koobista muuqaalka
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekadayada Luka Jovic ee Caruurnimada dheeraadka ah iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Sergej Milinkovic-Savic Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 25, 2019